Halkan ka dhagayso barnaamijka Hiigsiga Nolosha
Halkan ka dhagayso barnaamijka Hiigsiga Nolosha oo taxane ah, waakan kii baxay maanta oo jimce ah (12_02_2016).
12 Febraayo 2016
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Halkan ka dhagayso barnaamijka Hiigsiga Nolosha
Masar 5 sano kadib xil wareejintii Mubaarak
Waxaa maanta 5 sano laga joogaa markii uu xilka wareejiyay madaxweynihii Masar, Maxamed Xusni Mubarak, oo xilligaasi wajahayay dibed baxyo xooggan.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Masar 5 sano kadib xil wareejintii Mubaarak
WHO oo shir caafimaadka Somaliya ku saabsan qabaneysa
Waxaa magaalada Nairobi ka furmaaya shir ku saabsan xaaladda caafimaadka ee Soomaaliya oo ay soo abaabushay hay'adda caafimadka addunka ee WHO.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan WHO oo shir caafimaadka Somaliya ku saabsan qabaneysa
Barnaamijka ciyaaraha ee todobaadkan
Halkan ka dhageyso barnaamijka ciyaaraha ee todobaadkan, oo uu inala socod siinayo Cabdifitaax Ibraahim Cagayare.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Barnaamijka ciyaaraha ee todobaadkan
Qalab ciyaaro oo la siiyay ciyaartoyda Puntland
Xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya waxa uu qalab dhameystiran ugu deeqay xafiiska maamulka kubadda cagta ee Puntland oo dhamaadkii isbuucan xafiis cusub u guuray.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Qalab ciyaaro oo la siiyay ciyaartoyda Puntland
Nin Indhaha la' oo baraha bulshada ku sheekeeya
Dalalka hormaray ee caalamka waxaa dadka indhaha la baraa sidii ay u gaari lahaayeen heer isku filnaansho ah oo ay ka mid tahay isticmaalka technology-yadda.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Nin Indhaha la' oo baraha bulshada ku sheekeeya
Jangali: Waxaan ogaannay in qaraxu bam ahaa
Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista hawada ee Soomaaliya, Cali Axmed Jaamac Jangali, ayaa sheegay in baaris ay sameeyeen ay ku ogaadeen in qaraxii ka dhacay dayaaraddii Daallo uu ahaa bam argagixiso oo la doonayay in dadka rakaabka lagu laayo.
7 Febraayo 2016
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Jangali: Waxaan ogaannay in qaraxu bam ahaa
Maxkamadda sare: Xoghayaha NUSOJ waa Cumar Faaruuq
Maxkamadda Sare ee Soomaaliya ayaa go'aan ka gaartay muran muddo dheer soo taagnaa oo ku saabsanaa Ururka Suxufiyiinta Qaranka ee Soomaaliya oo la isku heystay.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Maxkamadda sare: Xoghayaha NUSOJ waa Cumar Faaruuq
Hubaal la’aan ka jirta magaalada Marka
Magaalada Marka oo maalmihii la soo dhaafay ay gacan ku haynteedu is dhaaf-dhaafaysay ayaa wararkii u dambeeyey waxay sheegayaan in bartamaha magaalada ay ku sugan yihiin dagaallamayaasha Al-Shabaab, sida ay ku warramayaan dad magaalada deggan.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Hubaal la’aan ka jirta magaalada Marka
Dharka huudheyda iyo magaalada Hatgeysa
Magaalada Hargeysa waxaa xilligan oo kale qaboobaha ku soo bata baayac mushtarka dharka dhaxanta iyo suudhadhka ee baaliga ah oo si gaar ah looga keeno yurub. 7 Febraayo 2016
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Dharka huudheyda iyo magaalada Hatgeysa
Boombale Xijaab xiran
Muran ka dhashay Facdbook
Barnaamijyada Shukaansiga loo adeegsado adduunka
Halkan kala soco wararka la xiriira Fayraska Zika
Saameynta doorashada Uganda ku yeelanayso Soomaalida dalkaasi
Daawo: Qaxootiga jooga xuduudda Turkiga
Shaqooyin ay BBC Soomaali qorayso
Norway oo kala nooc ka dhigaysa dhaqaalaheeda